Translation Disclaimer | Mysite 1
Qiimaha barashada khibradda leh
KU SAABSAN AQOONSIGA SHAQADA
ADEEGYADAAN WAA IN LA XIRIIRA TURJUMIYADA LAGU SAMEEYEY GOOGLE. GOOGLE wuxuu cadeeyaa dhamaan dammaanadaha la xiriira turjumida, qeexitaan ama wax ka bedelid, ku darrida sharuuc kasta oo la hubo, isku kalsooni, iyo dammaanad qayaxan oo ku saabsan SHAQADA SHAQADA, XUQUUQDA UJEEDLADA UJEEDKA IYO XANUUNKA.
Websaydhka 'ALAPTO' waxaa loo tarjumay sidaad ugu habboon tahay adiga oo adeegsanaya barnaamijyada tarjumaadda ee ay adeegsato Google Translate. Dadaallo macquul ah ayaa la sameeyay si loo bixiyo turjumaad sax ah, hase yeeshe, tarjumaad otomaatig ah oo kaamil ah ama sidii loogu talagalay oo lagu beddelayo tarjubaannada aadanaha ma aha. Tarjumida waxaa loo fidiyey adeeg loogu talagalay isticmaaleyaasha websaydhka 'ALAPTO', waxaana loo bixiyaa "sidii la mid ahaa." Lama dammaanad qaadi karo nooc kasta ha ahaadee, ama haloo muujiyo ama ha ahaadee, loo sameeyey saxnaanta, isku halaynta, ama saxda ah ee tarjumaadda Ingiriisiga ah oo laga sameeyay luqad kasta. Waxyaabaha qaarkood (sida sawirrada, fiidiyowyada, Filaashka, iwm.) Looma tarjumi karo sababa la xiriira xaddidaadda kombiyuutarka tarjumaadda.
Qoraalka rasmiga ahi waa nooca Ingiriisida ee websaydhka. Wixii farqi ah ama kala duwanaansho ah ee lagu abuuray turjumaadda ma aha kuwo khasab ah oo aan lahayn saameyn sharciyeed oo ku saabsan u hoggaansanaanta ama ujeeddooyinka fulinta. Haddii ay jiraan wax su'aalo ah oo la xiriira sax ahaanta macluumaadka ku jira websaydhka tarjuman, tixraac nooca Ingiriisiga ah ee websaydhada oo ah nooca rasmiga ah.
2019 waxaa qoray Aldo Leopold Ururka Macallimiinta waalidiinta & kuwa kale
Waxaa si sharaf leh loogu abuuray Wix.com